Ihe na-eduzi na mkpuchi mkpuchi: njirimara na ihe onwunwe | Green Renewables
Portillo nke German | 12/04/2022 12:00 | Ọzụzụ
na ihe na-eduzi na mkpuchi a na-ekewa ha dịka omume ha si dị gbasara ọkụ eletrik. Enwere ndị nwere ike iduzi ọkụ eletrik na ndị ọzọ, n'ụzọ megidere nke ahụ, enweghị ike ime ya. Ihe ndị a nwere njirimara dị iche iche ma jiri ya na mpaghara dị iche iche nke ụlọ ọrụ na ụlọ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere conductive na mkpuchi ihe na ihe nke ọ bụla n'ime ha bụ maka.
1 Ihe na-eduzi na mkpuchi
2 Gịnị bụ ihe na-eduzi?
3 Gịnị bụ ihe semiconductor?
4 Gịnị bụ a superconducting ihe?
5 Gịnị bụ ihe mkpuchi ihe
6 Ọmụmaatụ nke Nrụpụta na Ihe mkpuchi
Enwere ike kewaa ihe n'ụdị abụọ sara mbara: conductors na insulators. Ọ ga-abụ ihe ziri ezi ịkọwapụta ha dị ka ezigbo ndị nduzi na ndị na-eduzi ọjọọ, dabere ma ihe ọ bụla na-akwado ma ọ bụ na-egbochi ịkwọ ụgbọala. Nkewa a na-emetụta ma ọ bụ thermal conductivity (ya bụ mbufe ọkụ) ma ọ bụ elele eletriki (ya bụ mgbaba ugbu a).
Ma ihe na-eduzi ọkụ eletrik ma ọ bụ na ọ bụghị na-adabere na mfe nke electrons nwere ike isi na ya gafere. Ndị protons anaghị emegharị ahụ n'ihi na, n'agbanyeghị na ha na-ebu ụgwọ eletrik, ha na protons na neutron ndị ọzọ na-ejikọta na oghere. Valence eletrọn dị ka exoplanets na-agba gburugburu kpakpando. Ha na-adọrọ mmasị zuru ezu ịnọ n'ebe, ma Ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-ewe nnukwu ume iji wepụ ha n'ebe.
Ọla na-ada ngwa ngwa ma nweta electrons, n'ihi ya, ha na-achị ndepụta nke ndị nduzi. Ụmụ irighiri ihe ndị dị ndụ na-abụkarị ndị insulators, otu akụkụ n'ihi na ejikọtara ha site na njikọ covalent (electrons nkịtị), kamakwa n'ihi na njikọ hydrogen na-enyere aka mee ka ọtụtụ mkpụrụ ndụ kwụsie ike. Ọtụtụ ihe abụghị ezigbo ndị nduzi ma ọ bụ ezigbo mkpuchi. Ha adịghị eduzi ọkụ eletrik n'ụzọ dị mfe, ma na ike zuru ezu, electrons na-agagharị.
A na-ahụ ụfọdụ ihe mkpuchi na steeti dị ọcha, ma ha na-akpa àgwà ma ọ bụ na-emeghachi omume ma ọ bụrụ na ha na-doped na obere ego nke ọzọ mmewere ma ọ bụ ọ bụrụ na ha nwere adịghị ọcha. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ceramik bụ ezigbo insulators, mana ọ bụrụ na ị gbanwee ha, ị nwere ike nweta superconductor. Mmiri dị ọcha bụ ihe mkpuchi, mana mmiri ruru unyi adịghị eduzi ya, ebe mmiri nnu nwere ion na-ese n'efu na-eme nke ọma.
Gịnị bụ ihe na-eduzi?
Ndị na-eduzi bụ ihe ndị ahụ na-enye ohere ka electrons na-asọba n'etiti ihe ndị ahụ. Ihe eji eme ihe ga-enye ohere ịnyefe ụgwọ n'ofe elu ihe ahụ dum. Ọ bụrụ na a na-ebufe ụgwọ na ihe n'otu ebe, a na-ekesa ngwa ngwa n'elu elu ihe ahụ dum.
Nkesa nke ụgwọ bụ n'ihi mmegharị nke electrons. Ihe ndị na-arụ ọrụ na-enye ohere ka a na-ebufe electrons site na otu akụkụ gaa na nke ọzọ n'ihi na ihe ebubo na-ekesa ụgwọ ya mgbe niile ruo mgbe a na-ebelata ike na-asọ oyi n'etiti oke electrons. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na onye nduzi ebubo batara na ihe ọzọ, onye nduzi nwere ike ibufe ụgwọ ya na ihe ahụ.
Nbufe ụgwọ n'etiti ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ihe nke abụọ bụ ihe na-eduzi. Ndị na-eduzi na-enye ohere ịnyefe ụgwọ site na mmegharị eletrọn n'efu.
Gịnị bụ ihe semiconductor?
N'ime ihe ndị na-eduzi anyị na-ahụ ihe ndị nwere otu ọrụ mana nke nwekwara ike ime dị ka ihe mkpuchi, ọ bụ ezie na nke a dabere n'ọtụtụ ihe. Ihe ndị a bụ:
okpomọkụ nke gburugburu gị
Ihe semiconductor kacha eji eme ihe bụ silicon, germanium na naanị nso nso a ka ejiri sọlfọ mee ihe dị ka ihe semiconductor.
Gịnị bụ a superconducting ihe?
Ihe a na-adọrọ mmasị n'ihi na ọ nwere ikike dị n'ime ya na ihe ahụ kwesịrị iduzi ọkụ eletrik, ma n'okpuru ọnọdụ dị mma, na-enweghị nkwụsị ma ọ bụ nkwụsị nke ike.
N'ozuzu, resistivity nke dara conductors na-ebelata na ibelata okpomọkụ. Mgbe okpomọkụ dị oke egwu ruru, nguzogide nke superconductor na-adaba nke ọma, ma na-eme ka ike dị n'ime ya na-aga n'ihu, n'agbanyeghị na enweghị ike. A na-emepụta ihe na-enweghị atụ.
Ọ na-eme n'ụdị dị iche iche, gụnyere ihe ndị dị mfe dị ka tin ma ọ bụ aluminom nke na-adịghị egosipụta nguzogide eletriki, si otú a na-egbochi ihe ahụ ịbanye na ngalaba ya. Kedu ihe bụ mmetụta Meissner, ọ na-enye ohere ka a na-emegharị ihe ahụ, na-edebe ya n'elu mmiri.
Gịnị bụ ihe mkpuchi ihe
N'adịghị ka ndị nduzi, insulators bụ ihe na-egbochi ikuku electrons site na atom gaa na atom na site na molecule gaa na molecule. Ọ bụrụ na a na-ebufe ibu ahụ na onye na-ese ihe n'otu ebe, oke ibu ga-anọgide na ebe mbụ nke ibu ahụ. Ihe ndị na-ekpuchi ọkụ anaghị ekwe ka eletrọn dị n'efu, ya mere a na-ekesakarị ụgwọ ahụ n'elu ihe mkpuchi ahụ.
Ọ bụ ezie na insulators adịghị uru maka nnyefe ụgwọ, na-arụ ọrụ dị mkpa na nnwale electrostatic na ngosipụta. A na-etinyekarị ihe na-arụ ọrụ n'ihe mkpuchi. Nhazi a nke ndị na-eduzi n'elu ihe mkpuchi ahụ na-egbochi ịnyefe ụgwọ site na ihe na-eduzi ya na gburugburu ya, na-ezere ihe mberede dị ka obere sekit ma ọ bụ ọkụ eletrik. Nhazi a na-enye anyị ohere imegharị ihe na-eduzi ya n'emetụghị ya aka.
Ya mere, anyị nwere ike ịsị na ihe mkpuchi ahụ na-arụ ọrụ dịka aka maka onye na-eduzi n'elu tebụl ụlọ nyocha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na a na-eji soda aluminom mee nnwale ndị ahụ. ekwesịrị ịwụnye mkpọ ahụ n'elu iko rọba ahụ. Iko na-arụ ọrụ dị ka ihe mkpuchi, na-egbochi soda nwere ike ịdaba.
Ọmụmaatụ nke Nrụpụta na Ihe mkpuchi
Ọmụmatụ nke ihe ndị na-eduzi agụnye ihe ndị a:
Ọmụmaatụ nke ihe mkpuchi mkpuchi gụnyere ihe ndị a:
Nkewa nke ihe n'ime ụdị nke ndị na-eduzi na insulators bụ ihe nke ngalaba artificial. Ọ ka mma idowe ihe ahụ ebe n'akụkụ continuum.
A ghaghị ịghọta na ọ bụghị ihe niile na-eduzi nwere otu conductivity, na ọ bụghị ihe mkpuchi niile na-eguzogidekwa mmegharị nke electrons. Conductivity bụ ihe yiri nghọta nke ụfọdụ ihe na ìhè.: A na-akpọ ihe ndị na-adị mfe "ịgafe" ọkụ "transparent", ebe ndị na-adịghị mfe "ịgafe" na-akpọ "opaque". Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile transperent nwere otu anya conductivity. Otu ihe ahụ na-aga maka ndị na-eduzi ọkụ eletrik, ụfọdụ dị mma karịa ndị ọzọ.
A na-etinye ndị nwere ihe ngosi dị elu, nke a maara dị ka ndị superconductors, na-etinye n'otu njedebe na ihe ndị dị ala na-etinye na njedebe nke ọzọ. Dị ka ị pụrụ ịhụ n'elu, metal a ga-etinye n'akụkụ kasị conductive ọgwụgwụ, mgbe A ga-etinye iko ahụ na nsọtụ nke ọzọ nke continuum. Nrụgharị nke ọla nwere ike ịbụ trillion trillion karịa nke iko.
Okpomọkụ na-emetụtakwa conductivity. Ka okpomọkụ na-abawanye, atom na electrons na-enweta ume. Ụfọdụ ihe mkpuchi, dị ka iko, bụ ndị na-eduzi dara ogbenye mgbe oyi na-atụ, ma ka na-eduzi nke ọma mgbe ọ na-ekpo ọkụ. Ọtụtụ ọla bụ ndị nduzi ka mma.. Ha na-ekwe ka jụrụ oyi na ndị nduzi ka njọ mgbe ọkụ. Achọtala ụfọdụ ezigbo ndị nduzi na superconductors na oke okpomọkụ dị ala.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị nwere ike ịmụtakwu gbasara ihe ndị na-eduzi na mkpuchi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » General » Ọzụzụ » Ihe na-eduzi na mkpuchi
tundra anụ ọhịa